Waqooyiga gaalgacyo ayaa waxaa ka dhacay iska hor imaad u dhaxeeyay ciidamada ammaanka Puntland iyo rag hubaysan. – STAR FM SOMALIA
Waqooyiga gaalgacyo ayaa waxaa ka dhacay iska hor imaad u dhaxeeyay ciidamada ammaanka Puntland iyo rag hubaysan.
Wararka ka imaanaya Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug, ayaa sheegaya in saaka uu halkaasi ka dhacay iska hor imaad u dhaxeeyay ciidamada ammaanka Puntland iyo rag hubaysan.
Iska hor imaadka ayaa wuxuu ka dambeeyay, kadib markii ragga hubaysan ay diideen inay ka tagaan dhul la sheegay inuu ka mid yahay Dhulka Dowladda, kaasi oo Maamulka Puntland uu ku amray inay ka baxaan dadkii ku sugnaa.
Goobta dagaalka uu ka dhacay ayaa waxa ay ku dhaw dhahay agagaarka Iskuulka Caymiska ee Waqooyiga Gaalkacyo ku yaallo, wuxuuna dagaalka salka ku haayaa Garaash la sheegay inay leedahay Dowladda oo ay ka bixi waayeen dadkii haystay.
Hal ruux oo ka mid ahaa dhinacyadii dagaalamay ayaa halkaasi ku dhintay, halka ay jiraan dhaawacyo soo gaaray askar iyo dad shacab ah oo maraayay goobta dagaalka uu ka dhacay.
Labo ka tirsan ciidamada maamulka Puntland ayaa la soo wariyay inay ku dhaawacmeen iska hor imaadkaasi iyo arday mareysay goobta dagaalka uu ka dhacay.
Ciidamo ka tirsan Booliska Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ayaa gaaray goobta, waxaana wararka ay sheegayaan raggii hubaysnaa inay ku sugan yihiin meel aanan ka fogeyn halka ciidanka ay joogaan.
Masuuliyiinta Maamulka Gobolka Mudug ee Puntland weli kama aysan hadlin dhacdadaan saaka ka dhacday magaalada Gaalkacyo.
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali (Gaas) ayaa horay ugu amray dadka Gaalkacyo ku sugan ee ku nool guryihii Dowladii hore inay halkaasi deg deg uga baxaan.